मंगलामा योजना कार्यान्वयन धमाधम (भिडियो खबर सहित ) – धौलागिरी खबर
मंगलामा योजना कार्यान्वयन धमाधम (भिडियो खबर सहित )
धौलागिरी खबर	 २०७७ चैत्र १६, सोमबार ०७:२० गते मा प्रकाशित 366 0
बाबियाचौर । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १३५ वटा पुर्बाधार योजना सञ्चालन गरेको छ ।
बजेट बिनियोजन भएका योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रियाको साथै उपभोक्ता समिति गठन गरेर कार्यान्वयन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुङ्गानाले सबै योजनाको सम्झौता भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
“ठूला योजना ठेक्का र साना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “२५ प्रतिशत योजनाको भुक्तानी भइसकेको छ । त्यतीनै संख्याका योजना निर्माण सकेर अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि अनुगमनको चरणमा छन् ।”
सडक निर्माण, स्तरोन्निति, भवन, सिचाई, खानेपानी, नदी तथा पहिरो नियन्त्रण, खेलमैदान निर्माण सँग सम्बन्धित योजना धेरै छन् । ८ वटा योजना ठेक्का प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयनका लागि निर्माण ब्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ ।
रु. तीन लाख भन्दा कम बजेटका योजनाको पेश्कि नदीने र काम सकिएपछि एकै पटक भुक्तानी गर्ने नीति लिएको छ । उपाध्यक्ष सिर्जना केसीले कुहुँ, बरंजा र अर्मनका अधिकांश योजना निर्माण सकेर अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि जनप्रतिनिधि र प्राबिधिकहरुको टोलीले अनुगमन सुरु गरेको बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल रु. ४२ करोड आठ लाख ८४ हजार बिनियोजन भएकोमा २०७७ फागुन मसान्त सम्म ३०.२७ प्रतिशत अथवा रु. १२ करोड ७४ लाख २५ हजार बजेट खर्च भएको छ ।
लेखापाल लेखनाथ अधिकारीले आठ महिनाको अवधिमा चालु तर्फ ४२.५ र पुँजिगत तर्फ १७.४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताउनुभयो । चालु तर्फ रु. २१ करोड ५४ लाख ८६ हजार बिनियोजन भएकोमा रु. नौ करोड १५ लाख ७९ हजार खर्च भएको छ ।
पँुजिगत तर्फ रु. २० करोड ५३ लाख ९८ हजार बिनियोजन भएकोमा रु. तीन करोड ५८ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ । काम सकेका योजनाहरुको भुक्तानी सुरु गरिएकाले चैत देखि पँुजिगत खर्चको दर बढ्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बैशाख महिना अघिनै योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिएको बताउनुभयो । योजनाहरुलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन प्राबिधि टोली सहित छड्के अनुगमन पनि गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाको वडा न. ३ र ४ मा पर्ने बरंजा लगायत अन्य वडाका बस्तीहरु जोड्ने सडकलाई गौरवका आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयनमा लगेको छ । पुलचोक–पाखु–धारा–सिर्कुम सडक स्तरोन्नतिका लागि रु. ६९ लाख, ९२ हजार ५६ मा आचार्य निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
बाबियाचौर–काफलचौर–सल्यान–हिदी सडक आयोजना निर्माणका लागि मंगला कन्ट्रक्सनसँग रु. ३० लाख आठ हजार ५३३ मा सम्झौता भएको छ । वडा न. ३ र ४ मा पर्ने बरंजालाई पालिकाको केन्द्र बाबियाचौर जोड्ने पोक–बरंजा सडक स्तरोन्नतिका लागि रु. दुई करोड ८० लाख ९८ हजार ३२४ मा देब एण्ड सायर–तिलक जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
सिम–कोत्रवाङ–कुहँु–अधेरीखोला–पूर्णगाउँ हुदै टोड्के जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि रु. ६८ लाख ४८ हजार ४५७ मा सोमरस निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको छ । बरंजा जोड्ने सडकको ठेक्कामा बचेको रु. ५३ लाखको काम गर्न अर्को ठेक्का आव्हान गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले शसर्त अनुदान शिर्षकमा रु. पचास लाख बिनियोजन गरेको बरंजा देखि धापुङ सिले हुदै अर्गल जोड्ने अर्को सडक आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा छ । १० शैया क्षमताको अर्मन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि ठेक्का आव्हान गरेको छ ।